गगनसँग डराएको सरकार उत्रियो बदनाम गर्ने प्रपोगण्डामा - Purbeli News
गगनसँग डराएको सरकार उत्रियो बदनाम गर्ने प्रपोगण्डामा
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आषाढ २६, २०७६ समय: १७:०३:१७
काठमाडौं। पछिल्लो हप्ता नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापालाई अमेरिकी सुत्र भनेर आरोप लगाएर समाचार सार्वजनिक भएको थियो। उक्त समाचार अहिले भन्दा १२ बर्ष पहिले , नेपालमा भएको अमेरिकि दुतावासले आफ्नो मुख्यालयलाई गरेको ईमेललाई विकिलिक्सले सार्बजनिक गर्ने क्रममा बाहिर आएको डकुमेण्ट हो । यो २०६८ भदौ देखी नै ‘पब्लिक डोमेन’ मा उपलब्ध थियो । गुगल गर्दा भेटिने सामाग्रिलाई ‘ब्रेकिङ न्युज’का रुपमा प्रस्तुत गरियो ।
पछिल्लो समयमा सराकरी संयन्त्र गगन थापा लगायत कांग्रेसका केहि नेताको चरित्र हत्या गर्ने प्रयासमा आफ्ना कार्यकर्ता एवं नजिकका पत्रकारहरुलाई निर्देशन दिने गरेको श्रोतले बताएको छ। सराकर बिरुद्ध कडा टिप्पणी एवं प्रश्न गर्ने गरेका थापा पहिलो निशानामा परेका छन्। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरु आफ्ना कार्यकर्ता प्रति गगनलाई तह लगाउन नसकेको भन्दै असन्तुष्ट रहेका छन्। यसरी अनेक किसिमको प्रपोगण्डा गर्दा पनि गगनलाई कुनै असर नपरेको देखेर ‘अमेरिकी सुत्र’को आरोप लगाइएको छ। उनलाई अमेरिकी दुतका रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ।
यस्तो थियो समाचार :
गगनले हास्दै भने, केही महिना अगाडि म जापान सरकारको निम्तोमा जापनिज राजदूतको व्यवस्थापनमा एक सदस्यीय उच्च स्तरीय भ्रमण गरेर आए । एक साता अघि १० जनाको टोली लिएर चीन गएर आए ।२ दिन पछि बेलायत जादै छू, यही महिनाको अन्त्यमा भारत जादै छु । यसरी मेरो भ्रमण भै रहन्छ र यस्तो भ्रमण मा जादा त्यो देशको राजदुत, राजानितिकर्मि, सरकारी पदाधिकारी सग भेट हुन्छ । नेपाल मै पनि सामान्यता कुनै देशबाट डेलिगेसन वा उच्चस्तरीय भ्रमण आउदा म सायदै छुट्छु होला । यसरी सधै मलाई बोलाउनुमा नेपाली काँग्रेसको सदस्य साथसाथै नेपाली राजनीतिमा क्रियाशिल एक युवा प्रतिनिधिको धारणा सुन्नका लागि होला भन्ने मलाइ लाग्छ । यहाँको राजदूतहरुसँग पनि मेरो भेट हुन्छ । कुराकानी भइराख्छ । त्यो अबसरमा देश र पार्टी का विषयमा विचार आदान प्रदान हुन्छ । यस्तो भेटको बारेमा पार्टि र ससदलाई आवश्यक सन्दर्भ अनुसार जानकारी गराउने गर्छु र भेटमा के भन्नुहुन्छ, हुदैन भन्ने बारेमा, मेरो सिमारेखाको बारेमा र मर्यादाको बिषयमा सधै सचेत छु र रहन्छु ।
तर रमाइलो कुरा के छ भने तिनै दस्तावेजमा थुप्रै नेताहरुलाई अझ ‘क्लोज एम्बेसी कन्ट्याक’ का रुपमा उल्लेख गरिएको छ। जस्तै हेरौं भिम रावललाइ ‘ भनिएको क्लोज कन्ट्याकको अंश https://wikileaks.org/plusd/cables/09KATHMANDU692_a.html ‘10. (SBU) Home Minister Bhim Rawal isaclose Embassy contact and an experienced leader well-placed to oversee the police services.’
ने.क.पा एमालेका त्तात्कालीन महासचिब झलनाथ खनालको त बायोडाटा सहित ‘कि कन्ट्याक’ भनेर व्याख्या गरिएको छ।
‘(SBU) Following is biographic information about key ministers in the current Nepali cabinet.
तर रमाइलो कुरा यहि छ समाचार लेख्नेले यो केहि भन्दैन, त्यहि डकुमेण्टमा भएको गगनको मात्र नाम निकाल्छ र यसरी भन्छ मानौ अरु ‘कि कन्टयाक’हरु केहि होइनन, त्यो गगनलाई भनिएको ‘कि कन्टयाक’ चाहि खतरनाक एजेण्ट हो । तेस्रो कुरा, गगनले त्यतिबेला गरेको कुराकानी भनि राखिएको बिबरण हेरौ ।
सबै भन्दा रमाईलो त यो छ कि , गगनलाई फसाउने दाउमा रहेका प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालको रिपोर्टिङ त गगनको प्रशंग संगै उल्लेखित पृष्ठमा छ । अझ संगै रहेको गगन थापाको अंश मात्रै राखेर विष्णु रिमालको कुरा काटेर प्रस्तुत गरिएको हिसाबले थहा हुन्छ कति नियोजित छ यो खबर । https://wikileaks.org/plusd/cables/09KATHMANDU999_a.html
यसमा अमेरिकन सहयोग भने रत्तिभर पनि थिएन । तर नियोजित अनलाइन लेख्छ, यो सबै खर्च अमेरिकि दुतावासले गरेको हो ।
वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले ससारभरी बाट प्रत्येक बर्ष ससारलाइ प्रभावित गर्न सक्ने क्षमता भएको भनेर केहि युवाहरुलाइ योङ ग्लोबल लिडरको रुपमा छनौट गर्छ, २०१५ मा गगन छानिएका थिए । योङ्ग गोल्बल लिडरले आफ्नो सदस्यहरुलाइ मात्र उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति हार्वड, क्याब्रिज, अक्सफोर्डजस्तो विश्वविद्यालयहरुमा प्रख्यात कोर्स गराउने गर्दछ । हार्वडमा गगनले पढेको कोर्स पनि त्यही मध्येको रहेको कुरा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको वेवसाईटको यो लिङ्कमा https://wappp.hks.harvard.edu/young-global-leaders-global-leadership-and-public-policy-21st-century गएर सजिल्यै हेर्न सकिन्छ। गगन हार्वड पढ्न जानलाइ अमेरिकि दूतवासको वा अमेरिकन सरकारको कुनै संलग्नता र सहयोग छैन ।
गगनसँग प्रधानमन्त्रीको टिम रिसाउनुको कारण धैरै छन,उनले सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्व संसदमा गर्ने तर्कसंगत र जोडदार प्रस्तुति नै मुख्य हो । यतिबेला पारो तात्नुमा खास त्यही दिन थियो फलफुल-तरकारीको विषादी परिक्षण कार्य स्थगनको विषयमा संसदमा कुरा राख्दै गगन थापाले प्रधानमन्त्रीलाइ प्रश्न गरेका थिए,’घुडामा कत्रो भ्वाङ पर्यो प्रधानमन्त्री ज्यू, ? त्यसो त बिरोधी उपर रिमालले झ्वाक फेर्दै त्यसको एक दिन पहिले सरकारको विरुद्वमा लाग्नेहरुलाइ सामाजिक संजालमा‘छौंडाहरु …’ भनेर लेखेका थिए, जुन कुराको सर्वत्र आलोचना भइरहेको थियो ।
विष्णु रिमालका कुरा सुनेर कोठामा जम्मा भएका मध्ये एक जनाले भने, हामीले प्रत्येक दिन गगनका बारेमा केही न केही फण्डा बनाएर छापिरहेका छौ नी । प्रतिउत्तरमा विष्णु रिमालले भने तपाइहरुले छापेको समाचारले केही लछारपाटो लगाउन सक्नुभएन, त्यो पुण्य गौतम मार्काले भएन । त्यस पछि त्यही कोठामा भएका एक जनाले भने त्यसो भए यसो गरौ । गगनका बारेमा मैले केही कुरा खोजेर राखेको छु । यस्तै बेलामा काम लाग्ला भनेर, यी हेर्नुस भनेर उनले आफ्नो ल्यापटप देखाए । ‘गज्जब हुन्छ, अघि बढनुस आजै गर्नुस’ रिमालले भने र बैठक सकियो ।